Minecraft - Androidsis | Gam akporosis
Minecraft bụ otu n'ime egwuregwu ndị kachasị ewu ewu n'ụwa niile. E nyefekwara ihe ịga nke ọma ya na kọmputa na ekwentị, ebe ị nwere ike ibudata ụdị gam akporo egwuregwu a. N'ime otu a, ị ga - ahụ ihe niile metụtara Minecraft nke ị gaghị echefu.
Ozi niile banyere egwuregwu ahụ, mgbanwe na ozi ọma na-abịakwute ya, yana aghụghọ kachasị mma, ịnwere ike ịchọta n'ụdị a. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye na - eso ụzọ Minecraft, ngalaba a enweghị ike ịhapụ ụzọ ọ bụla.
Otu esi eme ite ifuru na Minecraft
por Onyeka Onwenu eme 2 izu .
Na Minecraft ị nwere ike ịtụkwasị obi n'ọtụtụ ihe, enwere ike imepụta ọtụtụ n'ime ha iji nweta ha. N'aha nke…
Otu esi eme mkpanaka ọkụ na Minecraft
por Onyeka Onwenu eme 1 ọnwa .
Ọ bụ otu n'ime egwuregwu franchise nke Mojan Studios, onye mepụtara Minecraft a ma ama, aha a na-edobe ekele maka mmadụ niile…
Etu esi eme brik na Minecraft
Ọ bụ otu egwuregwu kachasị ewu ewu ewepụtara, dabere na obodo nke ọtụtụ nde ndị egwuregwu na taa…
Mkpụrụ nke Minecraft 9 kacha elu
Ọ bụ otu n'ime egwuregwu kachasị mkpa na ụlọ ọrụ ahụ, nke ọtụtụ ndị na-emepụta ọdịnaya na-akwado ya na…
Uzo esi enweta ihe ndi a na-adighi ahu anya na Minecraft
Ọ bụ egwuregwu dị mkpa na mmalite ya, nke ọtụtụ nde mmadụ na-egwu taa…
Otu esi eme tebụl akụ na minecraft
por Onyeka Onwenu eme Ọnwa 4 .
Ruo ọtụtụ afọ na-agafe, Minecraft na-ejigide ọmarịcha egwuregwu n'etiti nde ndị ọrụ mejupụtara nnukwu obodo ...
Otu esi ebudata ma wụnye skins Minecraft n'efu
por Ụlọ Ignatius eme Ọnwa 9 .
Akpụkpọ anụ Minecraft na -enye anyị ohere ịhazi ọdịdị nke agwa anyị. N'adịghị ka egwuregwu vidiyo ndị ọzọ, na Minecraft anyị nwere ike ...
Moddị 10 kachasị elu maka mbipụta Pocket Minecraft
N'agbanyeghị ịnọ n'ahịa ihe karịrị afọ 10, Minecraft bụ ma ga -aga n'ihu na -abụ otu egwuregwu ...
Etu esi ebudata Minecraft na ngwaọrụ akwadoghi
por Ụlọ Ignatius eme 2 afọ .
Abọchị ole na ole bụ otu n'ime egwuregwu ndị a na-atụ anya nke afọ a, yana oku nke ọrụ: Mobile, Minecraft ...
Ngwaọrụ adabaghị na Minecraft Earth
Mgbe ọtụtụ ọnwa echere, Minecraft Earth dị ugbu a na mba dị iche iche, dịka Spain na Mexico. O sina dị,…
Minecraft Earth dị ugbu a na Mexico
Anyị na-ekwu okwu ruo ọtụtụ ọnwa banyere ụdị nke ọzọ nke egwuregwu Minecraft na-ewu ewu: Minecraft Earth, egwuregwu na-eso ...